Akanakisisa Biodegradable Imbwa Poop Mabhegi | Imbwa dzeNyika
Kune kuwedzera uye kuwedzera kuziva nezvenyaya yezvakatipoteredza, uye pamwe ndosaka zvichiwedzera uye zvakajairika kuwana biodegradable imbwa tsvina masaga. kuitira kuti kunhonga tsvina yembwa yedu kurege kuitawo chiitiko chinosvibisa pasi redu.
Muchikamu chino hatisi kuzongotaura chete nezve akanakisa biodegradable imbwa tsvina masaga atinogona kuwana paAmazon, asi isu tichataurawo nezve izvo zvavari, marudzi avo akasiyana uye maitiro ekuasiyanisa. Zvakare, kana iwe uchifarira nyaya iyi, isu tinokurudzirawo iyi imwe post nezve poop mabhegi embwa.
Amazon Basics - Mabhegi ...
Edipets, Poop Mabhegi...
Mabhegi ane starchly...
Tsvina Bags ...
Mabhegi eGreener Walker...
Nova Imboxs 330 Mabhegi...
1 yakanakisa biodegradable imbwa poop bag
1.1 Bag rakazara compostable rakagadzirwa nechibage
1.2 Masaga akagadzirwa ne50% chibage starch
1.3 zvakachipa high density polyethylene masaga
1.4 High quality biodegradable mabhegi
1.5 600 mamwe mahombe mabhegi makuru
1.7 Biodegradable poop mabhegi
2 Sei uchisarudza bhegi rebiodegradable?
3 biodegradable dzimwe nzira
3.1 Zvizere biodegradable mabhegi
3.2 50% plastiki
4 Nzira yekuziva sei kana bhegi riri biodegradable
5 Kwaunotenga biodegradable imbwa tsvina masaga
yakanakisa biodegradable imbwa poop bag
Bag rakazara compostable rakagadzirwa nechibage
BIOOK Imbwa Dutu Mabhegi ...
Maonero anopfuura zviuru zviviri paAmazon anotsigira modhi iyi seyakanakisa pakati pemabhegi emarara embwa anodedera. Zvinhu zvavanogadzirwa kubva kuchibage, zvinopikisa zvakanyanya, zvinovhura zvisingaite uye panguva imwechete hazvina kuputika kana kunhuhwirira. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti vanotevedzera OK Compost chitupa cheEuropean Union neUnited States. Mushure mekushandiswa, bhegi rinoora uye zvakasara zvinosara hazvizosvibisa nharaunda. Mukuwedzera, inouya nekesi yekuvatakura sechipo.
Masaga akagadzirwa ne50% chibage starch
Zvimwe zvakachipa kupfuura muenzaniso wekare, mabhegi aya ekutora tsvina yembwa yako haakwanisi kuparara zvachose, kunyangwe iwo aine 50% yechibage starch uye iwo mameseji (semupumburu mukati memabhegi) anogadzirwawo kubva kune zvinogadziriswa zvakare semakadhibhodi. Iwo akakura chaizvo uye anoshingirira, pamwe nekusapinda mvura zvachose. Pasuru yega yega ine mazana matatu emabhegi akakamurwa kuita makumi maviri nemabhegi gumi nemashanu rimwe nerimwe.
zvakachipa high density polyethylene masaga
Kana iwe uchitsvaga mabhegi akachipa pasina kunyanya kushata kune zvakatipoteredza, iyi sarudzo haina kuipa. Kunyangwe iwo achigona kunge ari ecological (akagadzirwa ne-high-density polyethylene, anogona kushandiswa zvakare nyore, kunyangwe ichiri kusvibisa), iwo mahombe, anoshingirira, akasununguka kupfeka uye ane kukwana kwakakwana. Zvakare, huya nechipo chibatiso chebhegi. Pasuru yega yega ine masaga mazana matatu nemakumi matatu.
High quality biodegradable mabhegi
Amazon Brand - Umi Mabhegi...
Mabhegi eUmi haangovimbisi chete chigadzirwa chemhando yepamusoro, chinopikisa, chisina kudonhedza uye zvinonhuwira uye nehukuru hukuru, asiwo. ane biodegradable zvachose, sezvo vachivimbisa kuti mabhegi avo anogadzirwa kubva mucompostable materials, kunyanya kubva kumiriwo starches.. Iyo mhando inovimbisa kuti bhegi rinodonha roga mumwedzi gumi nemasere uye rakapfuura mazinga eUnited States neEuropean Union. Mukuwedzera, iwe unogona kusarudza pakati pezvinyorwa zviviri, imwe ine zvibato (kusunga bhegi uye kutakura zviri nyore) uye imwe isina. Iyo yekurongedza zvakare ine eco-hushamwari uye iri nyore kudzoreredza.
600 mamwe mahombe mabhegi makuru
Kana imbwa yako ichidyara sequoias kupfuura mapaini, ungangoda bhegi rakakura. Aya maGerman uye ane shit mupakeji (hazvigone kujeka zvakanyanya) vanozadzisa izvo zvavanovimbisa: kwete uye kwete asingasviki 600 masaga anenge 30 cm asina microplastics uye anovimbisa kurasa pasina kusiya zvakasara kumashure, uye ane iyo OK Compost garandi chisimbiso cheEuropean Union kuratidza. Pamusoro pezvo, dzakasimba zvakanyanya, hadzina kunhuhwirira, uye dzinodonhedza- uye inonhuhwirira.
Chigadzirwa chinonakidza uye chezvakatipoteredza chinofanira kurumbidzwa nekuda kwekuvimbika kwayo, sezvo vachivimbisa kuti vanogadzirwa zvakanyanya kubva kuchibage., asiwo kubva kune petroleum derivatives (iyo, sezvaunogona kufungidzira, haisi yakanaka kwazvo). Nekuzodaro, vanoshuma kuti kunyangwe iine zvinhu zverudzi urwu, vane kemikari inovatendera kuti vaparadze nekufamba kwenguva. Mabhegi ane OK Compost chisimbiso cheEuropean Union uye anopikisa zvakanyanya, mukuwedzera, ane zvibato, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuvhara nekutakura.
Biodegradable poop mabhegi
Chekupedzisira, mamwe mabhegi ane biodegradable (tinoti "zvishoma" nekuti, sezvizhinji zvigadzirwa, pane chete chikamu chakagadzirwa kubva kuchibage starch). Muchiitiko ichi, kune anenge mazana maviri nemakumi mana emabhegi egirinhi, ane kurongedza akagadzirwa nekadhibhodhi, izvo zvakare zviri nyore kudzoreredza. Nekudaro, mamwe matauriro anoti iwo akati derere uye inonetsa kuvhura, saka kana imbwa yako ichida kuenda kuchimbuzi ungangoda chimwe chinhu chinopikisa.
Sei uchisarudza bhegi rebiodegradable?
Parizvino, uye nekuwedzera, kukosha kwakawanda kuri kupihwa kune zvakatipoteredza nemabatiro atinoita vanhu pazviri (inonzi ecological footprint). Kwenguva yakareba isu vanhu takashandisa zvinhu zvinokuvadza pasi sepurasitiki, izvo zvinotora mazana emakore kuti zvidzikise nekunyangarika. Muchokwadi, kunyangwe kana ichinge yadzikisira, inosiya mucherechedzo wemicroplastics izvo zvinozotitorera isu sezvo, pakati pezvimwe zvinhu, inoguma yave kudyiwa nehove (uye fungidzira kuti ndiani anodya hove).
Nechikonzero ichi, uye tichifunga kuti imbwa dzinozvibatsira, semazuva ose, kakawanda pazuva, zvinokurudzirwa zvikuru kusarudza chigadzirwa kuunganidza tsvina kuti ndeyezvakatipoteredza sezvinobvira, uye nokudaro kuderedza tsoka yedu pasi pano.
biodegradable dzimwe nzira
Kuva kunetseka kutsva, tichiri muchikamu chekuyedza nezve "mapurasitiki matsva", ndiko kuti, zvinhu zvinonyatsofanana nepurasitiki asi zvakagadzirwa kubva kune zvimwe, zvisingakuvadzi zvinhu. Mumusika tinogona kuwana:
Zvizere biodegradable mabhegi
Ndivo vanotevera mirairo yeU.SA (kurembedza zvishoma) neiyo yeEuropean Union. Izvo zvinogadzirwa kubva kumidziyo iyo, sezvatakataura, yakafanana nepurasitiki asi haina mapolymers uye inogadzirwa kubva kune mimwe miriwo, sechibage. Vanopikira kuibvisa mumazuva ane zana uye kusasiya rudzi rupi norupi rwezvisaririra zvinosvibisa. Mukati memhando iyi yebhegi, zvakare, pane biodegradable (iyo inoputsika nekuita kwe microorganisms) kana compostable (inoputsika pasi pemamiriro ezvinhu chaiwo uye inosiya mushure mecompost).
Ivo havasi ivo vakanakisa sarudzo, kunyangwe kana vakavimbisa kusvibisa hafu, nekuti mushure mezvose vanoramba vachisvibisa. Iwo anoumbwa ne50% epurasitiki uye 50% biodegradable zvinhu, mazhinji acho anogadzirwa kubva kuchibage, semuenzaniso. Zvizhinji zvigadzirwa zverudzi urwu zvinoperekedzwa nemukati mupumburu wekadhibhodhi uye pasuru yemapepa akadzokororwa. Izvo chete zvakanaka ndezvekuti zvakachipa pane izvo zvakazara biodegradable.
Dzimwe nguva mhinduro yemhando yepamusoro ndiyo yakanyanya kunaka. Kana iwe uchida chigadzirwa chinogona kuparara zvachose chisingasiya pasi uye chakachipa zvakanyanya, zviri nani kushandisa bepa. Asina kugadzikana kupfuura masaga epurasitiki, ndizvo zvataishandisa kare kuunganidza poo kubva kumbwa. Kunyangwe zvichikwanisika kushandisa clínex, iyo yechokwadi classic ipepanhau: hapana anokunda ecology uye zvakachipa.
Nzira yekuziva sei kana bhegi riri biodegradable
Nzira yakanakisa yekutarisa kana bhegi riri biodegradable kana compostable iri kuburikidza nechisimbiso chayo, iyo inosimbisa kana ichitevera zvakatemwa zveUnited States kana European Union.
Uye zvakare, pakutanga kutarisa uye kunyangwe iwo achiita seakafanana nemabhegi epurasitiki, biodegradable kana compostable mabhegi. vanewo zvimwe zvinhu zvinovasiyanisa, semuenzaniso, kubata, sezvo vachiwanzoita rougher, kana kuti kunhuwa, kunowanzova kwakati wandei kupfuura epurasitiki.
Kwaunotenga biodegradable imbwa tsvina masaga
Unogona tenga mabhegi kuti utore tsvina yembwa yako munzvimbo dzakawandaNekudaro, havasi vese vanozowana nyore mamodheru ari biodegradable. Pakati pezvinonyanya kuzivikanwa ndezvi:
En Amazon vane, pasina kupokana, nhamba huru kwazvo yemabhegi embwa anoodeka pamusika. Nekudaro, dzimwe nguva zvigadzirwa zvinogona kunyorwa zvisirizvo kana kutsausa, sezvo mazhinji asina kuzara biodegradable. Zano rakanaka usati watenga chero chinhu nderekutarisa kuongororwa, nekuti vashandisi vazhinji vanonyatsoziva rudzi urwu rwechinhu.
En specialized online zvitoro seTiendaAnimal kana Kiwoko zvinokwanisikawo kuwana akawanda marudzi emabhegi. Muchiitiko ichi, zvakakodzera kutora mukana weimwe yeayo akawanda madhiresi kana kukwidziridzwa kuti iite yakachipa.
Pakupedzisira mukati zvitoro zvinonyanya kushandisa zvigadzirwa zvekushandisa kamwe chete, saMonouso, iwe uchawanawo zvakawanda zvezvigadzirwa zvinozadzisa basa razvo asi zvisingakuvadzi kune zvakatipoteredza.
Biodegradable imbwa tsvina mabhegi chigadzirwa icho, kana chikashandiswa zuva nezuva, chakakosha kuve chakachena sezvinobvira, handiti? Tiudze, unoshandisa chero rudzi rwemabhegi aya? Unotikurudzira here? Unoshandisa rudzii rwechigadzirwa kunhonga tsvina yembwa yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Akanakisa biodegradable imbwa poop mabhegi